मुरादाबादमा भयो भयंकर दुर्घटना, १० जनाको मृत्यु – Wow Sansar
काठमाडौ । भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने मुरादाबाद जिल्लामा ठूलो दुर्घटना भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बस र कन्टेनर आपसमा ठो’क्किँ’दा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ। साथै २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
आगरा हाईवेस्थित कुन्दरकी थाना क्षेत्रमा नानपुर पुलनजिक शनिबार बिहान केन्टेनर र बस आपसमा ठो’क्कि’एका हुन्। ओभरटेक गर्दा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
यो अर्को समाचार, नाका नियमित खुल्ने
नेपाल सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीको झुलाघाट नाकासहित कैलालीको गौरीफण्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र दार्चुलाको खलङ्गा गरी चार नाका खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि झुलाघाट नाकामा अत्यावश्यक काम परेकाका लागि सोमबार र शुक्रबार हप्ताको दुई दिन आवतजावत गर्न दिइएको थियो । अब भने नियमितरुपमा सञ्चालनमा आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले गरेको निर्णयसहित भारतीय पक्षलाई पत्राचार गर्छौं, भारतले सहमति जनाएको दिनदेखि नै नाका नियमित सञ्चालनमा आउँछ ।” नाका पुनः सञ्चालनमा आएपछि सीमावर्ती बजारको व्यापारले गति लिने उद्योग वाणिज्य सङ्घ बैतडीका अध्यक्ष नरबहादुर चन्द बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नाका बन्द हुँदा खस्किएको व्यापार व्यवसाय नाका नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएपछि सहज हुने विश्वासमा छौँ ।
Prevयस्ती छोरी जसले आमाको शवलाई दश वर्षसम्म फ्रिजरमा राखिन्, कारण थाहा पाए पर्नुहुनेछ चकित्
Nextके तपाईं टाउको दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? भान्छामै भेटिने यी औषधीको गर्नुहोस् प्रयोग !!